133 အဘို့ရလဒ် zombie games
အခုသင့်ရဲ့အလုပ်ကသင်၏မြို့အတွက်အရူးသွားကြသည်သမျှသောဖုတ်ကောင်သတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ နာကျင်ရတဲ့မရှိဘဲဖုတ်ကောင်ရိုက်ကူးသကဲ့သို့ရှည်လျားတတ်နိုင်သမျှများအတွက်ရှင်သန်။ သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုအဆင့်တိုင်း၏အဆုံးမှာဒင်္ဂါးပြားနှင့်အတူအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ ဂိမ်းညွှန်ကြားချက်များ: ကိုအသုံးပြုခြင်း mouse ကို t ကို
သေနတ်များတက် Pick နှင့်သေနတ်များနှင့်အတူဖုတ်ကောင်သတ္တဝါများနှင့်စီးပွားရေးသမားများကိုပယ်ဗုံး။ သေနတ်များရှင်သန်နှင့်ဝယ်ကြလော့။
အပင် vs ဖုတ်ကောင်: ကြောင်စစ်
တစ်ဦးကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဂိမ်း, ကြောင်ဖုတ်ကောင်ကိုသတ်ခြင်းငှါလာကြ, သင်ကအဆင်သင့်ရှိသနည်း
တစ်လမ်းထွက်ရှာနိုင်ရန်အတွက်ဖုတ်ကောင်များ၏အလုံးအရင်းအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Fight ။ သူတို့ကိုထဲကယူရန်သင်၏လက်နက်အဆင့်မြှင့်တင်, သင်မူကား ammo ထဲက run တဲ့အခါသင်ပြန် Saloon မှ run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သွားကြသည်, ထွက်ကြည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးကြွင်းသောအရာကိုလည်း ယူ. mini-ဂရမ်မှာသွားလာရင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့်
တစ်ဦးကသေနတ်သမားဂိမ်း။ သင်တစ်ဦး Rambo-ရောနှောကွန်မန်ဒိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမကောင်းသောအဖုတ်ကောင်ကဖမ်းစေမရှိစေရေးအတွက်သင့်ရဲ့ခံတပ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကျွမ်းကျင်မှုစစျဆေးဖို့နဲ့ပျော်စရာရှိသည်ဖို့အံ့သြဖွယ်အရာ!
ဒစ် douche ဖုတ်ကောင်မြေယာ
ဖုတ်ကောင်ပုန်ကန်။ ဖုတ်ကောင်ပုန်ကန် game.You ရိုက်ကူးထုပ်ပိုးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအသေ island.Your ရည်ရွယ်ချက်မှာတာဝန်ပေးအပ်ပစ်မှတ်ပြီးစီးရန်သင့်လမ်းပေါ်မှာဖုတ်ကောင်ရိုက်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရရှိခဲ့ပြီးငွေနှင့်စတိုးဆိုင်၌သင်တို့၏လက်နက်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ အသစ်အောင်မြင်ရန်
ဖုတ်ကောင် Rip ဒါကကစားသမားများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖုတ်ကောင်ကိုသတ်ခြင်းနှင့်အပိုရမှတ်ဝင်ငွေဖို့ခေါင်းခွံကိုစုဆောင်းရန်သည်အဘယ်မှာရှိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သေနတ်ပစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားပေးသောဘဝများ၏ကန့်သတ်ငွေပမာဏအတွင်းအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ကူးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖုတ်ကောင် vs ပင်ဂွင်းငှက်များကို 2
2 အရုပ်ဆိုးဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖမ်းဆီးဖို့သွားကြသည် Penguins vs Zombies! ဒါပေမဲ့သူတို့ကအာဏာအရှိဆုံးစစ်တပ်အကြောင်းမသိရပါဘူး - ထို Penguins တပ်မတော်! တစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်သတ်အံ့သောငှါမွေးဘွား၏။ သက်သေပြပါ! ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကယ်တင် OR fo ကစားပင်ဂွင်းငှက်များကိုဖျက်ဆီးဖို့အားလုံးဖုတ်ကောင်ကိုသတ်
2206 ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးမားတဲ့ zomebie အကြပ်အတည်းသို့ကြွလာ။ အကောင်းဆုံးကိုစစ်သည်တော်အဖြစ်, သငျသညျသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နှင့်နိုင်ငံသားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှေးခယျြထားကြသည်။ သငျသညျသေမင်း၏အရိပ်ကနေမြို့စောင့်ရှောက်နိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာများမှာ! လာစမ်းပါ!
သငျသညျဖုတ်ကောင်များ၏ marsh.A အုပ်စုသတ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, သင်ကသူတို့ကိုသတ်ပစ်ရန်ရှိသည်! ရည်ရွယ်ထားနှင့်၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးဖို့ရွှေ့ဖို့မြှားခလုတ်များကိုသုံးပါနဲ့ Space Bar ကို။ ဓာတ်အားမှ Shift ။ စာနယ်ဇင်းအရေအတွက် 1 -2-3 -4 -5 သေနတ်များကိုရှေးခယျြဖို့။
၎င်း၏ဖုတ်ကောင်ရူးနောက်တဖန် ... စီးတီးဖုတ်ကောင်တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါသည်, ဖုတ်ကောင်နေရာတိုင်း action ကိုသို့အရအချို့သောဖုတ်ကောင်ကိုသတ်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်လက်နက်များနှင့်အထူးအာဏာကိုမဝယ်ရ 20th ကြမ်းပြင်မှာသောအိမ်ခေါင်မိုးထိပ်ရ။ တိုင်း4အဆင့်ဆင့်ပြီးနောက် Boss ။ အယ်လ်ရှိပါတယ်
ben 10 တပါးဖုတ်ကောင်, shot
ဘင် 10 ဆိုညှနျကွားခမှာရိုက်ကူးနိုင်သည်ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်၏နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးစက်သေနတ်နဲ့သူ့ရဲ့ tank မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်နေသည်။ အဆိုပါဖုတ်ကောင်ပြည်မှအပေါ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့လမ်းကြောင်းအပေါ်လူတိုင်းကိုကိုက်။ Ben10 အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်စုဆောင်းနားမှာရှိသမျှသောဖုတ်ကောင်ကိုသတ်ကူညီပါ
ဒီရယ်စရာဂိမ်းထဲမှာ Sponebob ရိုက်ကူးပန်းသီးရဲ့ဖုတ်ကောင်ဦးခေါင်းနှင့်နောက်လာမည့်အဆင့်ကိုပယ်ကူညီပါ။
ဖုတ်ကောင်ပိုးကူးစက်မှုအလွန်အစာရှောငျတစျခုလုံးကိုနာဇီစစ်တပ်ကူးစက်ခဲ့သည်ပြန့်နှံ့နေသည်, သင့်မစ်ရှင်သူတို့သည်မြို့ကို .... Good Luck ရောက်ရှိအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌စစ်ရေးဖုတ်ကောင်ကိုဖကျြဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ် !!
ငရဲ2မှာ jacko
Jacko ဟယ်လိုဝင်း၏အကြီးအစိတျဓာတျကိုခေါ်သောရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အသစ်သောအန္တရာယ်များနှင့်အတူသူသည်မိမိအအမှောင်မစ်ရှင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်
ဖုတ်ကောင် vs Batman
Batman, နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်ယခုသူဖုတ်ကောင်သတ်ဖြတ်သည်ဤအချိန်, အဆင့်တိုင်းအတွက်ဖုတ်ကောင်များ၏ပေးထားသောနံပါတ်ကို squish နှင့်အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အောင်မြင်မှုတွေကိုသော့ဖွင်။
ဒါကဂန္အယူအဆဖွင့်လှစ်ဂိမ်းအပေါ်တစ်ဦးလတ်ဆတ်ယူသည်။ ဒါကအဘယ်သူမျှမကအလွန်လှပသောဂရပ်ဖစ်နှင့်ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းနှင့်အတူပိတ်ပင်ဖုတ်ကောင်စတိုင် launcher ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။4ကျော်မြင်ကွင်းများ, 8 ဆုကြေးငွေများနှင့်သော့ဖွင့်ဖို့အောင်မြင်မှု၏တန်ချိန်နှင့်အတူဒီဂိမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါသည်
4 ဖောက်သည်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။ ကျော်ကို3ဖောက်သည်မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။
PSY ကအသစ်တစ်ခုတည်းနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံး Gangnam Run ကိုဂိမ်း: လူကြီးလူကောင်း, ပျော်မွေ့!
bloon မျှော်စင်ကာကွယ်ရေး 4
Thor ထွက်ရှာ Asgard ခြိမ်းခြောက်ဆိုးကတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ယူဖို့ကိုးဤလောကသို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူရမညျ။
ကစားစရာ vs အိပ်မက်ဆိုး
တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်ကိုကူးသွားနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ကစားစရာသော့ဖွင့်ဖို့အကုန်လုံးအိပ်မက်ဆိုး၏ Legion ကိုဖွိုဖကျြ။